ZANU-PF - What does ZANU-PF stand for? The Free Dictionary
Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary 11,509,182,070 visitors served
He joined ZANU-PF and was known as an ardent Mugabe supporter.
Harare [Zimbabwe], December 23 ( ANI ): Former Zimbabwe Defense Forces commander Constantino Chiwenga has been appointed as the new vice president of the ruling party ZANU-PF.
ZANU-PF has the largest number of seats in Zimbabwe's parliament by far, so the two-thirds majority needed to oust the president shouldn't be a problem.
HARARE: Zimbabwean President Robert Mugabe Sunday defied his own ZANU-PF party and hundreds of thousands of protesters demanding his resignation by pledging in a television address to preside over the party's next congress in December.
Zimbabwe's ZANU-PF sets Mugabe impeachment ball rolling (Update)
Bratton posits that ZANU-PF authoritarianism, which burgeoned in the 2000s, was transmitted into the PG with negative consequences for the governance and democratic goals which the GPA sought to achieve.
Bratton, Michael, Power Politics in Zimbabwe
A clear mandate for a reformist regime following the December ZANU-PF conference presents upside risks to our 2015 real GDP growth forecast of 2.
Newly released market study: Zimbabwe Country Risk Report Q3 2015
Indeed, much-needed foreign investment will remain at bay owing to the nationalistic policies of the ZANU-PF dominated government.
New Report Available: Zimbabwe Business Forecast Report Q4 2013
7 percent, extending Monday's 11 percent slide, as investors on the $5 billion Harare bourse digested the extent of the ZANU-PF win, which puts it in position to enact laws and change the constitution at will.
Mugabe to be sworn in after ruling on MDC court appeal
The stock market slump is the clearest sign yet of how jittery the business community is about ZANU-PF, whose economic policy platform centres on the "indigenisation" of foreign-owned companies - essentially forcing them to cede majority control to local blacks.
Mugabe aftermath: Zimbabwe stocks plunge after victory
ZANU-PF and its allies in the army and police went into over-drive, killing or 'disappearing' hundreds of MDC members, and Tsvangirai pulled out of the second round of the election.
Opinion: The Rehabilitation of Robert Mugabe - by Gwynne Dyer